February 2011 edited February 2011 in Network Accessories Sale
လူအများစု က Gmail 7Gb Storage Space သုံးနေချိန်မှာ သင့်၇ဲ့ Gmail ကို 20 GB Or 80GB နဲ့ သုံးချင်လား Gmail, မှာတင် မဟုတ်ဘဲ Picasa Web Albums, and Google Docs တွေမှာပါ ၇မှာပါ အသုံးပြုလိုပါက SpeedWay Online Service 095178391 သို့ဆက်သွယ်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်
Itune Account,Rapidshare Megaupload Hotfile Fileserve 4shared uploaded.to uploading.com filesonic Depositfile Cafezee Licence Version Skype Pfingo Topup Card Airasia.com မိမိနှစ်သက်၇ာ File Sharing, License Version Software,Game နှင့် Application များအတွက် Online ငွေပေးချေမှုများ ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Pfingo အကောင့်အသစ် ဖွင့်ပေးသည် အကောင့်သစ်ဖွင့်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်
Pfingo Pro Account ေ၇ာင်းသည်။ Pfingo Toup Card ေ၇ာင်းသည်။Skype အကောင့် FREE ဖွင့်ပေးသည်။Skype အကောင့်အတွင်းသို့ ငွေသွင်းပေးသည်
ှSkype Unlimited World တစ်လ 16000 Skype 10 credit = 10000 ကျပ် ချက်ချင်သွင်းချက်ချင်း၇ပြီ Hotfile Premium Account 1 Month 120006Month 35000 1 Year 55000
Gmail 20GB & 80GB avariable
We provide services for Online Payment, via "" Paypal or Credit Card "". Anyone want to buy somethings from website, we can pay for you. Just call phone or send email.
www.facebook.com (Game Credit)
www.worldofwarcraft.com (WOW account)
မေးချင်လို့ပါ။ အင်တာနက်ဖုန်းခေါ်တဲ့ ဆားဗစ်တွေက မြန်မာပြည်က ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ရော ခေါ်လို့ရနိုင်ပါသလား။ သိချင် စိတ်၀င်စားလို့ပါခင်ဗျာ။
ခေါ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ...မြန်မာပြည်ကို.Line phone.Mobile phone ခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်ကို..singapore 45 cent
ဆိုင်တွေကတော့တစ်မိနစ်ကို 500 ကျပ်လောက်ယူပါတယ်...skype လဲအဲဒီလောက်ပါပဲ..
PayPal ကို ကိုယ်ပိုင် အကောင့် လုပ်ပေးသလား . ကိုယ်စား ငွေချေရုံ သက်သက်ပဲ လုပ်ပေးတာလား သိချင်ပါတယ်
Paypal အကောင့် တော့ မလုပ်ပေးဘူးခင်ဗျာ ၇ှိပြီးသားအကောင့်ဆို၇င်တော့ ငွေသွင်းပေးပါတယ်
အယ် Paypal လက်ခံတဲ့ Website တွေက ၀ယ်ချင်တယ်ဆို၇င် လည်း ၀ယ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ